ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်သူစားသုံးသူများ၌လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားအသင်းအဖွဲ့စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ဤဆောင်းပါးတွင်ကိုးကားရန်: Harkness အမ်မလီအယ်လ်, Mullan ဘာဘရာနှင့် Blaszczynski အဲလက်စ်။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2015, 18 (2): 59-71 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2014.0343 ။
Published in ပြည်တွင်းသတင်း Volume ကို: 18 Issue 2: ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2015
အမ်မလီအယ်လ် Harkness, B, psyche (Hons;),1 ဘာဘရာ Mullan, Ph.D,1,2 နှင့်အဲလက်စ် Blaszczynski, Ph.D1
1စိတ်ပညာ၏ကျောင်း, ဆစ်ဒနီ, ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်။
2စိတ်ပညာနှင့်စကားရောဂါဗေဒ, Curtin တက္ကသိုလ်, ပါ့, သြစတြေးလျ၏ကျောင်း။
စိတ်ပညာနှင့်စကားရောဂါဗေဒ၏ကျောင်းစာအုပ် Curtin University မှ Kent လမ်း Bentley WA 6102
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားတည်ရှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုဘုံဖြစ်ပါသည်, သေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်အတူ၎င်း၏ link ကိုဆန်းစစ်သုတေသနင်း၏နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏။ အန္တရာယ်မကင်းလိင်အလေ့အကျင့်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအရေအတွက်ကိုအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ၏ညွှန်းကိန်းများ, ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ တစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေရှာဖွေရေး Medline, PsycINFO, အသိပညာ၏ Web သည် Pubmed နှင့် CINAHL သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်လူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏ညွှန်းကိန်းများအကြားအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်လျှင်လေ့လာရေးပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ 17 ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်နှင့်အပေါငျးတို့သအရည်အသွေးညွှန်းကိန်းစကေးကို အသုံးပြု. သုတေသနစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းနှင့်အထွေထွေညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးအဘို့, သာ. ကြီးမြတ်မလုံခြုံလိင်အလေ့အကျင့်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်နှင့်အတူလင့်များဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အနိမ့်ပြင်ပတရားဝင်မှုနှင့်ဆင်းရဲသောလေ့လာမှုဒီဇိုင်းအပါအဝင်စာပေ၏ကန့်သတ်မှု, တွေ့ရှိချက်များ၏ယေဘုယျတားမြစ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ပွားနှင့်ပိုပြီးတိကျခိုင်မာစွာနည်းလမ်းများအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။